आज चैत २७ गते शुक्रबार, यस्तो छ तपाईंको राशिफल:: Mero Desh
आज चैत २७ गते शुक्रबार, यस्तो छ तपाईंको राशिफल
Published on: २७ चैत्र २०७७, शुक्रबार ०१:३२
मेष (चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) सन्तान वा अनुयायीका माध्यमबाट फाइदा उठाउन सकिनेछ । यात्राको योग छ । मान्यजन वा अभिभावक वर्ग रुष्ट हुन सक्छन् ! जग्गा जमिन वा घरायसी सम्पत्तिको चिन्ताले सताउन सक्छ । समाजमा तपाईंका कुरा काट्नेको कमी हुने छैन । आक स्मिक यात्राको समय छ ।
बृष (ई,ऊ,ए, ओ, वा, वी, वू, वे, वो) शरीरमा आलस्य र थकानको अनुभव हुनेछ । अप्रिय समाचार सुन्नु पर्दा मन खिन्न हुनेछ मानसिक तनावको सिर्जना हुनेछ! आकस्मिक रूपमा स्वास्थ्यमा समस्या आउन सक्छ । खर्च बढ्नुको साथै शरीरमा आलस्यता बढ्नेछ बि’श्वास गरेकाबाट धोका हुन सक्छ ।
मिथुन (का,की,कू,घ,ङ,छ,के,को,हा) मनग्य धन कमाउने अवसर मिल्नेछ अरुको मनजित्न सजिलै सकिनेछ आम्दा नी बढ्ने र उठ्नु पर्ने रकम हात लागी हुने समय छ । कृषि तथा पशुधनबाट लाभ लिन सकिने छ!काममा रुची घट्नेछ भने मनमा खराब बिचारहरुले डेरा जमाउनेछन् ।
कर्कट (ही,हू,हे,हो,डा,डी,डु,डे,डो) अरुबाट तपाईंका काम को उच्च मूल्याङ्कन हुने सङ्केत छ!बोलीको कदर हुनेछ कुनै विशेष खुशीको समाचार सुन्न पाइएला । राम्रो कामको लागि काम गर्ने वातावरण मिल्ला । दिन दुःखीलाई दिएको सहयोगले रोकिएको काम बन्न सक्छ ! धन लगानी गर्ने अवसर पाउनुहुनेछ ।
सिंह (मा,मी,मू,मे,मो,टा,टी,टू,टे) व्यवसायिक क्षेत्रमा लाभ प्रद छ । पुराना इष्टमित्र र प्रेमी प्रेमिकाको मिलन हुने समय छ!उद्योग र व्यापारमा विशेष फाइदाको योग छ । सहयोगी हरूले साथ दिनेछन् !काममा सोचे जस्तै सफलता मिल्नेछ सहयोग, पुरस्कार र हौशला जस्ता कुराहरुमा बृद्दि हुनेछ ।
कन्या (टो,पा,पी,पू,ष,ण,ठ,पे, पो) बोलीको विपरीत अर्थ लाग्न सक्छ, बोलीलाई नियन्त्रणमा राख्नुहोला !व्यापारमा हानी व्यहोर्नु पर्छ ! कर्मचारीले अपजस व्यहोर्नु पर्छ । यात्रा घातक बन्न सक्छ!विश्वास गरेका व्यक्तिबाट नै वि’श्वासघात हुने सम्भावना छ ! यात्रा नगरेकै बेश होला समाजमा प्रति भाको कदर हुनेछ ।
तुला (रा,री,रु,रे,रो,ता,ती,तू,ते) विश्वास गरेका व्यक्तिबाट नै विश्वासघात हुने सम्भावना छ । पारिवारिक समस्याले मन खिन्न हुनेछअ’ध्ययन, अध्यापन र लेखनमा खास अभिरुचि हुनेछैन । माता पिताको स्वास्थ्यमा केहि कमजोरी आउने देखिन्छ । सभा सम्मेलनमा सहभागी हुने अवसर मिल्ला ।
बृश्चिक (तो,ना,नी,नू,ने,नो,या,यी,यू) मिष्ठान्न भोजन प्राप्त हुनेछ । पठन पाठनमा प्रगति हुनेछ । नसोचेका कामहरु बन्ने छन् ! आत्मवि’श्वास र शीघ्र नि र्णय गर्ने क्षमता अभि वृद्धि हुनेछ । विपरीत लिङ्गीबाट सहयोग मिल्ला । प्रशस्त धन आर्जन गर्ने मौका छ!कर्म प्राप्तिको योग छ राम्रै सफल ता मिल्नेछ ।
धनु (ये,यो,भा,भी,भू,ध,फा, ढा, भे) समय मनोरञ्जनपूर्ण रहनेछ । नयाँ ज्ञान सिक्ने मौका छ । व्यावसायिक यात्राको सम्भावना छ!दाजुभाइको प्र’गतिको समाचार सुन्न पाइएला पारिवारिक जीवन सामान्य र सन्तोष प्रद रहने छ । व्यवसा यबाट प्रशस्त फाइदा उठाउने मौका छ । प्र’तिस्पर्धीहरूले हार खान सक्छन् ।
मकर (भो,जा,जी,जू,जे,जो,ख,खी,खू,खे,खो,गा,गी) साना तिना काम र घरेलु समस्यामा नै समय व्यतीत हुनेछ प्रत्ये क काममा बाधा अडचन आउने छ । वादविवादमा फँस्ने र प्रतिफल प्राप्त नहुने क्षेत्रमा लगानी हुनेछ ! बौद्धिक र सृज नात्मक सफलता मिल्नेछ । स्वास्थ्यमा गडबडी भई दैनिक कामकाजमा असर पर्ने सम्भावना छ ।
कुम्भ (गू,गे,गो,सा,सी,सू,से,सो,दा) सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्ने समय छ ।परोपकार र धार्मिक क्षेत्रमा मन जानेछ दाम्पत्य जीवन सुखद तथा समृद्ध बन्ने देखिन्छ । आम्दानी प्रशस्तै बढ्नेछ । पारिवारिक सुख मिल्नुका साथै अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा प्रगतिको खबर सुन्न पाउनु हुनेछ ।
मीन (दी,दू,थ,झ,ञ,दे,दो,चा, ची) काममा माता पिताको सहयोग प्राप्त होला ममतापिता वा वि’शिष्ट व्यक्तिको विचा रले प्रभावित तुल्याउन सक्छ सवारी साधन प्रा’प्तिको योग छ व्यापारमा लाभ हुनेछ धर्म कर्ममा रुची बढ्नेछ खेलकुद तथा कलाकारिता क्षेत्रमा रहने हरुको लागि समय उत्साह प्रद देखिन्छ ।